Windows 10 ugbua na-arụ ọrụ na Samsung Galaxy S8 na ndị ọzọ gam akporo | Gam akporosis
N'ụzọ dị ịtụnanya, ahụla ya ka ọ na-arụ ọrụ Windows 10 maka ARM na Samsung Galaxy S8 na ndị ọzọ gam akporo ọnụ na Snapdragon 835 mgbawa na ha gootu.
Site na anya ya, ugbu a ka ọ dị edoziri ebe nchekwa metụtara na Windows 10 maka ogwe aka, na-emetụta Snapdragon 835 mgbawa, Microsoft sistemụ arụmọrụ nwere ike arụnyere na ekwentị ndị na-eji mgbawa a.
Ihe butere ọtụtụ ndị mmepe agbamume ka ha nwee sistemụ Microsoft na Samsung Galaxy S8 yana na ọdụ ndị ọzọ nwere otu mgbawa. Anyị na-ekwu maka ya Xiaomi Mi6, Xiaomi Mi MIX 2S na OnePlus 6.
- Evsio0n (@ onyekwere2001820) April 13, 2020
Nke ahụ kwuru, buru n'uche na ọ bụ ezie na Windows 10 nwere ike iwunye ma bido na ekwentị ndị a, ugbu a bara uru. Mana ihe dị mkpa bụ ohere niile mepere site ugbu a wee nwee ike ịme ọtụtụ ndị mmepe.
Ọ bụrụ na anyị kwuo na ọ baghị uru ma ọlị, anyị na-ekwu na ị nweghị ike iji ihuenyo mmetụ aka ma ọ bụ igwefoto n'onwe ya. Anyị ga-echere ndị mmepe a ndị jisiri ike wụnye Windows 10 na Galaxy S8 ịkọrọ nwụnye ndu na ọtụtụ ndị ọzọ na-amalite ule site na ngwa ha, mmemme na azịza ha.
Ihe bụ eziokwu bụ ịhụ Enwere ike ịwụnye Windows 10 na Samsung Galaxy S8 na ohere nke ịhụ ụzọ abụọ nke Windows 10 maka ARM na gam akporo. Anyị ga-ahụ ihe ha juru anyị anya n’oge na-adịghị anya, mana ihe doro anya na njikọ dị n’etiti Windows na gam akporo na-abịarukwu nso; ma ọ bụrụ na ịgwa ya ndị Samsung DeX ọrụ na Windows 10 ma ọ bụ na ngwa gị Samsung ekwentị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Windows 10 na-arụ ọrụ ugbu a na Samsung Galaxy S8 na gam akporo ndị ọzọ
Nokia 8 Sirocco malitere inweta gam akporo 10